Fanadiovan-drivotra miaraka amina orinasa mpanamboatra disinfection | Airwoods
Molecular teknolojia fanapahana rivotra disinfection karazana fanadio karazana tahan'ny sterilization dia hatramin'ny 99,9%. Taham-pandefasana rivotra madio (CADR): 480m3 / ora, mety amin'ny faritra 40-60m2. Esory amin'ny fomba mahomby ny fofona ary diovy ny PM2.5, zavona, vovobony, vovoka, VOC. Ny fanadiovan-drivotra dia nosedraina tao amin'ny ivon-toerana fikarohana microbiology. Ny tahan'ny famonoana otrikaretina H1N1 sy viriosy H3N2 dia manodidina ny 99,9%.
Teknolojia famotehana molekiola
Tsy ny mpanadio rivotra rehetra no manana fiasan'ny famonoana otrikaretina
Mamono bakteria sy viriosy
Tahan'ny famonoana otrikaretina> 99%
Mamoaka setroka organika
Afaka mamongotra ny nikôtinina (vokarina amin'ny sigara) ary manimba setroka organika loto.
Formaldehyde vaky, benzène
Famakiana voka-dratsy toy ny benzena sy andiana benzène, ny etona manimba dia tia formaldehyde ary ketone aldehyde nateraky ny trano ravaka tsy misy fandotoana faharoa.
Rehefa miditra ao anatin'ny singa fototra amin'ny fanadiovana ny rivotra maloto, dia mihatra amin'ny fatoran'ny molekiola an'ireo loto ny ionona be hery vokatry ny pulses tena mahery ao amin'ny singa fototra, ka mahatonga ny fatorana CC sy CH izay mamorona fatorana molekiola ao amin'ny zavamiaina bitika manimba indrindra. ary ny entona hanamontsana, noho izany dia novonoina ireo zavamiaina bitika manimba satria simba ny ADNan'izy ireo ary ireo entona manimba toy ny Formaldehyde (HCHO) sy Benzene (C6H6) dia vaky ao anaty CO2 sy H2O.
Ny famonoana otrikaretina sy fanadiovana mavitrika dia manome fahombiazana avo lenta amin'ny famonoana bakteria sy viriosy, manaparitaka gazy manimba ary potipoka setroka.
Tsy dia misy ahiahy
Tsy misy sisa tavela fandotoana faharoa crates tsy misy ahiahy sy fiarovana tsara kokoa.
Fanoherana ambany, fikojakojana ambany, fanariana ambany, fanjifana angovo ambany.
Previous: Vata famonoana rivotra madio ho an'ny rafitra HVAC
Manaraka: Orinasa mitantana ny rivotra mitambatra amin'ny indostria
Fanadiovan-drivotra tsara indrindra
Fanadiovan-drivotra amin'ny trano iray manontolo
Single Way Blower Rafitra fanivanana rivotra madio
Vata famonoana rivotra madio ho an'ny rafitra HVAC